VeeR VR အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.5 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（97.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် VeeR VR - Oculus Go, Rift, HTC Viveport, Gear
အကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးပေါ် VR ရုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေခြင်း？
ကျွန်ုပ်တို့အပြန်အလှန်ကြည့်ရှုသည့်ရုပ်ရှင်များ၊ ကာတွန်းကားများ၊ သိပ္ပံပညာ၊ ခရီးသွားနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်ဆုရစတူဒီယိုများနှင့်နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်အစီအစဉ်များမှအခြားအရာများရရှိထားသည်။
ဤမိုဘိုင်းအဖော်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူ သင်သည်ခရီးသွားစဉ်သို့မဟုတ်အနားယူချိန်အတွင်း Preview၊ Bookmark နှင့်ခေါင်းစဉ်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ VR နားကြပ်ဖြင့်နောက်မှကြည့်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းလ်အတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်မိုဘိုင်းနှင့် VR ပစ္စည်းအားလုံးအတွက်အကောင့်တစ်ခုအသုံးပြုပါ။
VeeR ကို Oculus Go & Rift၊ HTC Vive, Steam, Xiaomi, Pico, DPVR စသည့်အဓိကခေတ်မှီ VR နားကြပ်များအားလုံးတွင်ပံ့ပိုးသည်။
၄၈ နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားပါ: [email protected]
* ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့ လိုက်၍ ခေါင်းစဉ်အသစ်များအတွက်နားဆင်ပါ - Facebook: @letsveer
ချစ်ခင်ရပါသော VeeR ၏သူငယ်ချင်းဟောင်းများ -
ပရိသတ်အားလုံးကနေပရိသတ်တွေဆီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံမှု မှစတင်၍ သင်၏ဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုများအတွက်တီထွင်သူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့အရေးကြီးသောနောက်ဆုံးသတင်းများကိုယူဆောင်လာသည်။
•မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်တင်ခြင်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ••“ Likes” ကိုလက်ကိုင်ဖုန်းမှတင်သွင်းခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းကြိုက်နှစ်သက်မှုများအဖြစ်မှတ်ယူတော့မည်မဟုတ်ပါ။ •လက်ကိုင်ဖုန်းအဆုံးတွင်ဒေသခံမီဒီယာဖွင့်စက်ကိုမရရှိနိုင်ပါ။
•မိုဘိုင်းအဆုံးရှိ Download လုပ်ဆောင်မှုကိုဖယ်ရှားပြီး download လုပ်ထားသောအကြောင်းအရာများအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
ဘာအသစ်လဲ VeeR VR - Oculus Go, Rift, HTC Viveport, Gear 3.1.0
Oculus Go SETUP & REVIEW - Best VR Headset? | The Tech Chap
VeeR VR | Velocious Technologies | On Viveport
VeeR VR Review
VeeR 2.0 Is Here! Oculus Go/Rift | HTC Vive | Samsung Gear VR | Steam VR | Daydream VR
Veer VR Review & Gameplay on the Oculus Rift - Free To Play
VeeR VR - Oculus Go, Rift, HTC Viveport, Gear 2.5.3